religion – ပဒသော
သုတစုံ | August 12, 2020
အဂ္ဂေါ ဗုဒ္ဓေါ အဂ္ဂေါ ဓမ္မော၊ အဂ္ဂေါ သံဃော အနုတ္တရော။ အဂ္ဂေါ မေ ဝိပါကော ဟောတု၊ ယံယံ ဣစ္ဆံ သမိဇ္ဈတု။ဗုဒ္ဓေါ- မြန်စွာဘုရားသည်၊ အဂ္ဂေါ- အထွက်ဆုံး၊ အသာဆုံး၊ အလွန်ဆုံး အမြတ်ဆုံးသာတည်းဓမ္မော- တရားတော်သည်၊ အဂ္ဂေါ- အထွက်ဆုံး၊ အသာဆုံး၊ အလွန်ဆုံး အမြတ်ဆုံးသာတည်းသံဃော- သံဃာတော်သည်၊ အဂ္ဂေါ-
ငွေကို ရေလိုသုံးနိုင်ပြီး အလျှံပယ်လှူဒါန်းနိုင်တဲ့ထိ လာဘ်ဝင်စေတဲ့ ဂါထာတော်ကြီး
ဂါထာမန္တန်တွေဆိုတာ တကယ်အစွမ်းထက်ပါတယ်…ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သူရဲ့ သီလရယ်ယုံကြည်သက်ဝင်မှုရယ် ပေါင်းလိုက်ရင် တကယ့်ကို အကျိုးရှိစေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခုပြောပြပေးမယ့် ဂါထာတော်ကြီးကတော့ ငွေကြေးအဆင်မပြေဖြစ်နေသူတွေအတွက် ငွေကို ရေလိုသုံးနိုင်ရုံမက အလျှံပယ်လှူဒါန်းနိုင်တဲ့အထိ ချမ်းသာလာစေမယ့် ကျင့်စဉ်ဂါထာတော်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီဂါထာကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရမယ့် နည်းလေးကိုလည်း အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်“၂၄ ရက် အဓိဌာန် နှင်းဆီပန်း ၂၄ပွင့်/ဆီမီး၂၄တိုင်/တံခွန် ကုက္ကား တစ်စုံ/ရေဗူး အကြီးတစ်ဗူး.ဗူး နောက်မှာ
မြင်မြင်ချင်း ရှယ်လိုက်ပါ..တပတ်အတွင်း ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ပါပြီဗျာ…
ရသစုံ | August 12, 2020
မြင်လျှင် မျှ​ဝေလိုက်​ပါ သင်တစ်ပတ်အတွင်းေ​ငွ​တွေ သိန်းသောင်းနဲ့ချီ ဝင်​လားလိမ့်​မယ်​ ကံထူးလာပါလိမ့်မည်.ကံ.. ကံ၏ အကျိုး…….ရရှိမည်စီးပွားရေးတွေ ဒီရေအလားတိုးတက်ပြီး လိုအင်ဆန္ဒဟူသမျှ ပြည့်စုံမည်။ မနက်မျက်နှာလေးသစ်ရင် သရဏဂုံအမြဲရွတ်ပါ..မျက်နှာအကြည်ဓာတ်လေးရစေပါတယ်..သွားတိုက်ရင် ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားပါ.. ကိုယ်ရဲ့ကောင်းတဲ့အကြံအစည်အပြောအဆိုတိုင်း သူတပါးအား အောင်စေပါတယ်.. သတိရရင်ရသလို မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပါ.. မေတ္တာပေးတဲ့သူနား မေတ္တာပြန်ပေးသူတွေနဲ့ လုံခြုံနွေးထွေးစေပါတယ်.. တနေ့ ၂ ကြိမ် အနည်းဆုံး သောက်တော်ရေချမ်းကပ်လှူပါ..
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သူများကို အားကိုးမမှားစေနဲ့
သုတစုံ | August 11, 2020
အားလုံးဟာအကြောင်း မကုန်သေးလို့၊ခဏတာ ပေါင်းဆုံ နေကြရတာပါ။တစ်နေ့ ..သားနှင့်အမိ၊ ဇနီးမယား၊ လင်သားအိမ်ယာ၊ဆရာသမားဆိုတာ ခဏကလေး။ကံအကျိုးပေးထားလို့၊ ဆုံနေကြရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ အထင်မကြီးနဲ့။အထင်လည်းမသေးနဲ့။များမကြာခင် ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်သွားကြရမယ်လေ။မိမိဘဝ အဆင်ပြေအောင်၊ ကိုယ်သာ ကြိုးစားထားပေါ့။ ဆရာဒကာ ဆိုတာလည်း၊ ခဏတွေ့ကြရတာ။သူတို့လည်း တစ်နေ့ လမ်းခွဲကုန်မှာမို့၊အားလုံး ဧည့်သည်တွေနော်။နင်လည်း ဧည့်သည်။ငါလည်း ဧည့်သည်။အားလုံး ဧည်သည်တွေ မဟုတ်လား။ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ ခဏတွေ့ကြရတာပါ။ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမကိုးပါနဲ့။မိမိစိတ်မှာ ထင်ဟပ်နေတဲ့
အရှင်ခေမိန္နဒ ပြောတဲ့ သဒ္ဓါများပြီး ပညာနည်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့ရဲ့ ဆွမ်းတော်ကပ်လှုခြင်းအကြောင်း
သဒ္ဓါများပြီး ပညာနည်းတော့ ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ရင် သစ်သီးဆိုလဲ ခွဲစိတ်ပြီးတော့ ကပ်ရမယ်။ ထမင်း ဟင်းဆိုရင်လဲ လူစားသလို အကျအနပြင်ကပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။အပြင်မှာ တကယ့်သက်ရှိထင်ရှား ဘုရားရှင်ကို အဲဒီခေတ်က လူတွေ ဘယ်လိုလှူကြတယ်ဆိုတာ သိကြသလား။ ကျမ်းစာထဲပါတဲ့အတိုင်း ပြောပြမယ်။ ထမင်းရော ဟင်းရော ဘုရားရဲ့သပိတ်ထဲ ရောထည့်လိုက်တာပဲ။သစ်သီးဆိုလဲ ဒီအတိုင်း အလုံးလိုက် သပိတ်ထဲ ထည့်သူက ထည့်လိုက်တာပဲ။
ရသစုံ | August 11, 2020
သစ္စာဆိုပြီးတော့ မေတ္တာပွားတဲ့နည်း အဲဒီဂါထာ (၃)ပုဒ်က ရတနသုတ်မှာ ပါပြီးသား။ သစ္စာဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ လောကမှာ …သစ္စာဟာ အစွမ်းတန်ခိုး အင်မတန်မှ ထက်တယ်။ လူတွေက သစ္စာဆိုမှု အင်မတန်မှ နည်းကြတယ်။ တကယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် သစ္စာဆိုပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို တောင်းလို့ ရှိရင် သစ္စာရဲ့ စွမ်းအားဟာ ရှိတယ်။ မယုံရင်တော့
တနှစ်မှာ တစ်ခါပေါ်ပေါက်လာတဲ့ မြွေနဂါးပါ…(မြင်မြင်ချင်း ရှယ်လိုက်ပါ ရေ၀င်သလို ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်..)
ငွေကြေးအခက်အခဲကြုံတဲ့အခါတိုင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ရွတ်ဆိုလိုက်ရင် ချက်ချင်း ပြေလည်သွားစေတဲ့ လာဘ်ရွှင် ဂါထာတော် ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား၊ ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား ယုံကြည်မှုနှင့် ရွတ်ဆိုသင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့်ဂါထာတော်တရားဓမ္မ…အကြွေးဆပ်စရာရှိနေတာလား? အကြွေးတွေမရပဲဖြစ်နေတာလား? ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား? ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား? သောကများနေရတာလား? ဤဂါထာကို ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင် အဓိဌာန်တင်ပြီး ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ရပါမယ်။ တစ်နေ့ကို ၂၄ခေါက်ရွတ်ဆိုရပါမယ်။၂၄ရက်တိတိ
ကျောက်သားဖြင့် ပူဇော် ထုလုပ် ထားသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး
သုတစုံ | August 10, 2020
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်တွေကို ဂျပန်ပြည်၊ တရုတ်ပြည်တွေမှာ တော်တော်လေး ကို ဉာဏ်တော်မြင့်မြင့် (အကြီးကြီး) ထုဆစ်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း ဒီလို ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးရှိသလို အခုတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးမှာက တရုတ်ပြည်ကပါ။ထူးဆန်းတာက ကျောက်သားတွေ ကို ထွင်းထု ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပြီး၊ တကယ့်ကို ကြည်ညိုပူဇော်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံ၊ စီချွမ်ပြည်နယ်၊ လေရှန်မြို့ရဲ့ အရှေ့ဖက်မှာ တည်ရှိတဲ့ လေရှန် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဟာ ယူနက်စကိုက တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့နေရာလည်း
ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေလား မြွေဖြူရှင်ရဲ့ပုံကို မြင်မြင်ချင်းရှယ်လိုက်ပါ….
ရသစုံ | August 9, 2020
လက်ထဲ အမြဲငွေရွှင်စေတဲ့ ယတြာ…(ဘာမှမခက်ဘူးဗျာ အများသိအောင်လည်း မျှဝေပေးပါအုံးနော်….)
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ပညာရပ်များထဲက တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် အမြဲတမ်း ငွေမပြတ်စေတဲ့ယတြာ နှင့် ဈေးဆိုင် အရောင်းဆိုင်မှာ ဧည့်သည်စည် ကားစေရန် ယတြာ တွေ ငွေဖလား ဒါမှမဟုတ် ကြေးဖလားတစ်လုံးထဲမှာ ငွေစက္ကူထဲက တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ငွေစက္ကူတစ်ရွက် ကိုဖြန့်ခင်းထားလိုက်ပါ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ငွေစက္ကူ အတိုင်းအတာနဲ့တွက်ပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်၊ တတ်နိုင် တဲ့လူအတွက်ကတော့ တစ်သောင်းတန်ပေါ့၊ဒေါ်လာနဲ့အလုပ်လုပ်နေသူဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ထည့်ပေါ့ ပြီးရင်အဲဒီငွေစက္ကူထည့်ထားတဲ့ဖလားထဲကို ရေဖြည်းဖြည်းခြင်းလောင်းထည့်ပါ
ဆေးရုံပြဖို့စောင့်ရင်း ကိုယ်ဝန်နဲ့ မိန်းမညောင်းလာလို့ လူသားထိုင်ခုံလေးဖြစ်ပေးခဲတဲ့ ခင်ပွန်း(ရုပ်သံ)
အေးချမ်းလွန်းလှတဲ့ သာသနာ့အရိပ်ကို ခေတ္တ၀င်ရောက်သွားတဲ့ အဆိုတော်မိစန္ဒီ….
မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေအားလုံးမင်းသမီးသင်ဇာလိုအတုအယောင်တွေလိုက်မလုပ်ကြဖို့ သတိပေးရေးစပ်ထားတဲ့သီချင်း